Ungalufumana njani ulwamkelo kwiStanford Online Masters.
Septemba 9, 2021 Eze uThadayo
IStanford sesinye sezona zikolo zibalaseleyo emhlabeni kwaye nasi isikhokelo sendlela onokufumana ngayo ukwamkelwa kweStanford online masters.
IStanford lelinye lamaziko aphambili kwihlabathi, enikezela ngemfundo ephezulu kunye nokugqwesa kuluhlu lwayo lwezifundo, amaziko ophando lobugcisa, kunye noonjingalwazi. IStanford sisikolo samaphupha sabantu abaninzi abavela kwihlabathi liphela.
IYunivesithi yaseStanford liziko lezinto ezintsha, ukufunda, kunye nokufumanisa ukuba lenze igalelo elikhulu kwezamayeza, kwezobunjineli, kwezobugcisa, nakwezinye izinto ezinegalelo kuphuhliso kunye nokukhula koluntu kunye nehlabathi liphela.
Njengeziko eliphambili lezinto ezintsha, iStanford yenye yeeyunivesithi ezifuna ukutyhala imfundo ukuya kwinqanaba elilandelayo kwaye zisebenzisa izixhobo zedijithali zale mihla ukuba zikwazi ukufezekisa oko. Ndithetha ngokufunda nge-Intanethi, ngekhompyuter kunye nonxibelelwano lwe-intanethi ungafunda ngokuchanekileyo le nto ifundiswa eStanford kwintuthuzelo yekhaya lakho.
Ngelixa ukuyo, kuya kufuneka ubone uluhlu lwee Iinkqubo ezingama-20 zeekholeji ezikwi-Intanethi ezinekhonkco lesicelo apho ufunda khona ikhosi yasekhompyutheni, ubukhali ubuchule bakho kwaye ufumane isatifikethi
Obu buchule bukhethekileyo buvela eStanford kukwenza ukuba ukufunda kungabinamthungo, kwenziwe imfundo ekumgangatho wehlabathi ifumaneke kuye wonke umntu onomdla nakweyiphi na ikona yomhlaba. Ngale ndlela unokufumana izandla zakho nakweyiphi na ikhosi oyikhethayo kuyo nayiphi na inkqubo yesidanga onqwenela ukuyilandela eStanford ngokucofa iqhosha.
Oku kuncede ngeendlela ezininzi, ngenxa yokuba iStanford sisikolo esikhuphisana kakhulu kwaye sibiza kakhulu, iqonga layo lokufunda kwi-Intanethi linciphisa iindleko zokufunda ikhosi yaseStanford ngokude kwaye awuzukufuna ukukhathazeka malunga nokhuphiswano njengoko oko kungenakwenzeka kwi-intanethi.
Nangona kunjalo, sukuqala ukukhathazeka ngesiqinisekiso osifumeneyo mhlawumbi ngokucinga ukuba asiyonyani njengaleyo ifunyenwe kwisikolo esiqhelekileyo ekufuneka uyazi ngoku ukuba akukho mahluko phakathi kwezatifikethi ozifumanayo ukusuka eStanford kwi-Intanethi ukuya kwisikolo esiqhelekileyo saseStanford.
1.1 Ngaba iikhosi zeStanford ezikwi-Intanethi ziluncedo?
1.2 Ngaba iStanford inikezela ngeMasters kwi-Intanethi?
1.3 Ngaba iStanford Online Masters yasimahla?
2 IStanford kwiMasters ye-Intanethi
2.1 IiMasters kwiAeronautics kunye neAstronautics
2.2 IiMasters kwi-Biomedical Informatics
2.3 IiMasters kubuNjineli beMichiza
2.4 IiMasters kubuNjineli boLuntu neNdalo
2.5 IiMasters kwiNjineli yeComputer kunye neMathematics
2.6 IiMasters kwiNzululwazi yeKhompyutha
2.7 IiMasters kwiNjineli yoMbane
2.8 Masters kwiNzululwazi yoLawulo noBunjineli
2.9 IiMasters kwiZixhobo zeNzululwazi kunye nezoBunjineli
2.10 IiMasters kubuNjineli boMatshini
2.11 IiMasters kwiZobalo
2.12 Imirhumo yokufunda ngeStanford Online Masters Programme
3 Ungalufumana njani ulwamkelo kwiStanford Online Masters.
3.1 Ukulungela ukwamkelwa kwe-Master's Stanford Online
3.2 Imfuno yeStanford Online Master
3.2.1 Ingxelo yenjongo
3.2.2 Iincwadi zokuncoma
3.2.3 Iirekhodi zemfundo kwizikolo zangaphambili
3.3 Ukungenisa isicelo sakho seMasters eStanford kwi-Intanethi
Ukufumana izakhono, ulwazi kunye nokufunda izinto ezintsha akunakuze kuphele njengoko ufumana amathuba ahlukeneyo mihla le ukubonisa into oyaziyo.
Unokufuna ukufunda izakhono / ulwazi olutsha, ukuxubha kwizakhono ezikhoyo, okanye unokufuna ukwenza ikhondo lomsebenzi omtsha, iStanford kwi-Intanethi yindawo yakho.
I-intanethi yeStanford ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zekhosi ezikwi-intanethi kunye neenkqubo zesidanga ezifana nezidanga kunye nezidanga zobungcali, izidanga zesidanga sokuqala, izidanga eziphambili, kunye nezinye iinkqubo zemfundo zehlabathi kunye nezolawulo ezifundiswa ziingqondo eziqaqambileyo zikaStanford, oonjingalwazi, kunye nabaphandi ngokufanayo, ukunceda ekwenzeni umsebenzi wakho uphumelele.
Kuzo zonke iinkqubo zesidanga onqwenela ukulandela ngeStanford online, uya kufumana isatifikethi emva kokugqitywa.
Ngaba iikhosi zeStanford ezikwi-Intanethi ziluncedo?
Okokuqala, iStanford liziko elikwinqanaba eliphezulu ukwamkelwa kwayo kunye nemfundo ikudidi lwehlabathi kwaye wonke umbutho kunye nomphathi bayayazi le nto yiyo nayiphi na into eveliswe nguStanford ayinalo olu lwamkelo.
Iikhosi zeStanford zinengqibelelo kwezemfundo, eyamkelwa ngokulinganayo yimibutho kwihlabathi liphela, kwaye oku kungenxa yokuba iikhosi zifundiswa ngoonjingalwazi abaziwayo eStanford ngaphandle kweintanethi nakwi-Intanethi.
Ke, iikhosi zeStanford ezikwi-Intanethi zikuxabise ngokupheleleyo njengoko usafundiswa ikhosi yakho yomdla ngoonjingalwazi abavelise ialumni ebalulekileyo, iimfundiso kunye nezinto ezenziwayo azifani noko kufundiswa kwigumbi lokufundela kwaye uya kufunda kwaye uxhotyiswe Lonke ulwazi lwakho kunye nezakhono kufuneka ugqwese.
Isatifikethi sakho esikwi-Intanethi nakweyiphi na ikhosi yaseStanford saziwa kakhulu.
Ngaba iStanford inikezela ngeMasters kwi-Intanethi?
Ewe, iStanford ibonelela ngeenkqubo eziguqukayo ze-Master's degree kubo nabaphi na abantu abanomdla ukuba babhalise.
Iinkosi ezikwi-Intanethi zeStanford ziyafumaneka ngokusisigxina nangokwexeshana ukuze ukhethe eyona ilungele wena kwaye iyafumaneka kuye wonke umntu ukuba ayisebenzise.
Iinkosi ezikwi-Intanethi zeStanford ziya kunceda ngakumbi abo basebenzayo kwaye bathathe ixesha lesingxungxo kuya kukunceda ukuba uqhubeke nokusebenza ngelixa ufunda ukuze ufumane isidanga senkosi yakho kwi-Intanethi nasemva kokuba ugqityiwe, uya kuqinisekiswa njengomphumelele ngokupheleleyo eStanford.
Ngaba iStanford Online Masters yasimahla?
Inkqubo ye-intanethi yeStanford ayihlawulelwanga, kuya kufuneka uhlawule iifizi zokufunda ukuze ufumane kwaye ufumane isatifikethi senkqubo ye-intanethi yeStanford.
Kodwa iStanford ekwi-Intanethi ibonelela ngeendlela ezimbalwa izifundo zekhompyutha kwiinkalo ezahlukeneyo zokuba ufumane isandla sakho kwaye ufunde izakhono ezitsha, ezi zifundo zifuna imirhumo zero.
IStanford kwiMasters ye-Intanethi
Okwangoku, unesiqinisekiso sokuba iStanford ibonelela ngeenkosi ezikwi-Intanethi kodwa ngekhe wazi ukuba zeziphi iinkqubo zesidanga sokuqala esibonelelwa nguStanford kwi-Intanethi kwaye kulapho ndiza kudwelisa khona ukuze bakuncede.
Apha ngezantsi luluhlu lwazo zonke iinkqubo ezikhoyo zeStanford kwi-intanethi enokuthi ufake isicelo;
IiMasters kwiAeronautics kunye neAstronautics
IiMasters kwi-Biomedical Informatics
IiMasters kubuNjineli beMichiza
IiMasters kubuNjineli boLuntu neNdalo
IiMasters kwiNjineli yeComputer kunye neMathematics
IiMasters kwiNzululwazi yeKhompyutha
IiMasters kwiNjineli yoMbane
Masters kwiNzululwazi yoLawulo noBunjineli
IiMasters kwiZixhobo zeNzululwazi kunye nezoBunjineli
IiMasters kubuNjineli boMatshini
Iinkcukacha kwiiNkqubo zeDigital Master's Degree
Ukuzilungiselela ukuthatha indima yobungcali kwicandelo labucala okanye likarhulumente, le nkqubo ibonelela ngemfundiso ebanzi kunye nophando malunga nolwakhiwo, i-aerodynamic, isikhokelo kunye nolawulo, kunye nemicimbi yokuqhubela phambili kwenqwelomoya kunye nenqwelomoya.
Inkqubo yemfuno yeyunithi engama-45 enikezelwa ngokupheleleyo kwi-Intanethi ithatha iminyaka emi-3 ukuya kwemi-5 ukugqiba nabo bafake izicelo kufuneka bayigqibe inkqubo yesidanga sokuqala kubunjineli, kwi-physics, okanye kwinkqubo yesayensi.
Le nkqubo yenkosi ekwi-Intanethi yaseStanford iqeqesha abafundi ukuba babe ziinkokeli zophando ngokubaxhobisa ngezakhono zokubala kunye nezokubala ukusombulula iingxaki kwi-biology nakwamayeza.
Abafundi abafumana uqeqesho kwibhayoloji, isayensi yeekhompyuter, ubunjineli, amanani, uphando kunye nonyango lwamayeza, isayensi yedatha kunye nohlalutyo, kunye noqeqesho olunxulumene noko kuyalelwa ukuba bathathe le nkqubo njengoko izomeleza indawo yabo yobungcali kwaye ivule namathuba emisebenzi nangakumbi izikhundla kumbutho.
Inkqubo yesidanga se-Biomedical Informatics yimfuno yeyunithi engama-45 ekufuneka igqitywe kwisithuba seminyaka emihlanu ukuqala kwenkqubo kwaye abafaki-zicelo kufuneka sele beqeshiwe kwaye besebenza ngaphambi kokuba baqale inkqubo kwaye kufuneka bahlale beqeshwe ngalo lonke ixesha lenkqubo.
Usoloko ufuna ukufumana isatifikethi semasters kwi-engineering yobunjineli beStanford, eli lithuba lakho lokufezekisa amaphupha akho. Inkqubo iyafumaneka ngokupheleleyo kwi-Intanethi kubafakizicelo abanomdla abavela kwihlabathi liphela ukuba bafake izicelo kwaye babe yingcali yobunjineli bemichiza.
Abafundi baya kuthatha iikhosi eziphambili zobunjineli bemichiza kwiindawo ezinje ngeekhemikhali kinetics, i-molekymodymomics yeemolekyuli, kunye nobunjineli bemichiza kwaye bayakhuthazwa ukuba bathathe iikhosi ezikhethiweyo ezinje ngokushishina, ukusebenzisa kakuhle, amandla, okanye ukusebenzisa imathematics. Zonke iikhosi ozikhethileyo ziya kujongwa kwaye zamkelwe ngumcebisi.
Kwakhona, abafundi kufuneka bagqibe kwaye bafumane isidanga sebhatshela kwinkqubo enxulumene nesayensi ngaphambi kokufaka isicelo senkqubo yobunjineli bemichiza. Inkqubo le iiyunithi ezingama-45 kwaye ithatha iminyaka emi-2-5 ukuyigqiba exhomekeke ekubeni ujolise kangakanani kodwa akufuneki ukuba idlule kwiminyaka emi-5.
Iinjineli zasekuhlaleni nezokusingqongileyo zezona zingqondo ziphambili zokwakha zonke iziseko ezingqonge thina, zibaluleke kakhulu kwaye zifunwa kakhulu kumacandelo abucala nakurhulumente.
Ukufumana ulwazi oluphambili lobunjineli boluntu kunye nokusingqongileyo kuya kukuqhubela phambili kwilizwe loyilo lwezixhobo kunye nendalo kwaye enkosi kwinto entsha yaseStanford, ungafunda kwaye ufumane ulwazi oluphambili olufunekayo ngeStanford online.
Le nkqubo ziiyunithi ezingama-45 kwaye ithatha umyinge weminyaka emi-3 ukuya kwemi-5 ukuyigqiba.
Le nkqubo idibanisa uqeqesho olwahlukileyo, ikhompyuter, imathematics, ubunjineli, kunye nesayensi esebenzisiweyo edityanisiweyo kwaye ifundiswe abafundi ukubaxhobisa ngolwazi oluphambili kwiindlela eziphuculweyo zekhompyuter kunye noyilo lobunjineli kunye nokusetyenziswa kwezesayensi.
Ngelixa le nkqubo inikezelwa kwisininzi kwi-Intanethi kufuneka igqitywe kwikhampasi ukugqitywa kwesidanga, yinkqubo yeyunithi ye-45 kwaye ithathe umndilili we3 ukuya kwiminyaka emi-5 ukuyigqiba.
Ewe, sonke siyayazi indlela ebaluleke ngayo inzululwazi yecompyuter kule minyaka ikhoyo kwaye nabantu abanolwazi olusisiseko babambe izikhundla ezilungileyo kumbutho, kodwa abantu abanolwazi oluphambili babambe isikhundla esiphakamileyo nangakumbi.
IStanford kwi-Intanethi ikunika ithuba lokuba sisazinzulu sekhompyuter esihamba phambili, oku kungakunika isikhundla esiphambili kumbutho kwaye uvule amathuba emisebenzi angcono kwicandelo labucala okanye likarhulumente.
Ngaphambi kokufaka isicelo sale nkqubo abafaki-zicelo kufuneka ukuba bayigqibe inkqubo yesidanga sokuqala kwiziko elaziwayo. Inkqubo yesayensi yekhompyuter ye-Intanethi yeyunithi yeeyunithi ezingama-45 kwaye ifuna umndilili we3 ukuya kwiminyaka emi-5 ukugqiba.
Ukufumana ulwazi oluphambili kunye nokuba yingcali eqinisekisiweyo kubunjineli bombane ngenkqubo yesidanga seStanford.
Ngaphambi kokufaka isicelo sale nkqubo, kufuneka ube nesiseko esomeleleyo kwisayensi yomzimba, imathematics, kunye nobunjineli. Kuya kufuneka ukuba ugqibezele isidanga seminyaka emine kunye nonyaka omnye ubuncinci benkqubo yesidanga sokuqala.
Inkqubo yeyunithi ye-EE 45 eseStanford inokugqitywa kwiminyaka emi-3-5.
Ukuthatha le khosi kunceda injineli ukuba ijongane nazo zombini iimfuno zobuchwephesha nezolawulo zombutho, ukucinga kwakho okunzulu, kunye nezakhono zohlalutyo ziyaphuhliswa, uya kuba nakho ukwenza uvavanyo lokuyila iinkqubo ezingcono kwaye uqonde indlela yokuhlalutya idatha ukusombulula okwenyani- iingxaki zehlabathi.
Ukufaka isicelo senkqubo yesayensi yolawulo kunye nenkqubo yobunjineli, abafaki-zicelo kufuneka babambe isidanga sobunjineli okanye isidanga esinxulumene noko (esikhulu okanye esincinci) esiqulathe ukubala okwahlukileyo kwezinto ezahlukeneyo kunye nealgebra yomgama.
Abafakizicelo kufuneka babe nesiseko esomeleleyo kwinkqubo, amanani, kunye noqoqosho. Le nkqubo ziiyunithi ezingama-45 kwaye ithatha umndilili weminyaka emi-3-5 ukuyigqiba.
Thatha inxaxheba kule nkqubo yoqeqesho oluphambili kwiziseko eziqinileyo zelizwe kunye nezinto zobunjineli ukuze ufumane izakhono eziza kukwenza ukuba ube sisazinzulu kunye nezinto zobunjineli.
Inkqubo ikwi-Intanethi ngokupheleleyo kwaye ifuna iminyaka emi-3 ukuya kwemi-5 ukugqiba iimfuno zeeyunithi ezingama-45.
Ubunjineli boomatshini yenye yeendlela eziphambili zokuqhuba zeli xesha langoku, ngalo uqeqesho ukuveliswa kweekhompyuter kunye nabanye oomatshini kwenziwa ukuba kwenzeke. I-intanethi yeStanford ibonelela ngale nkqubo yenkosi kuye wonke umntu onomdla wokuqhubela phambili ulwazi lwabo kwaye abe yingcali kule ndawo yokufunda.
Indawo yobungcali ibandakanya ulawulo oluzenzekelayo, iinkqubo zamandla, oomatshini bokuhambisa amanzi, ukuhambisa ubushushu oomatshini abaqinileyo, kunye nobunjineli bobuchwephesha, uya kufumana ulwazi oluphambili kwaye uxhotyiswe ngezakhono eziyimfuneko kwezi ndawo.
Abafakizicelo benkqubo yesidanga sobunjineli kufuneka ukuba bayigqibile isidanga sebhatshela kubunjineli, kwi-physics, okanye kwinkqubo enxulumene nesayensi. Le nkqubo ziiyunithi ezingama-45 kwaye ithatha umyinge weminyaka emi-3 ukuya kwemi-5 ukuyigqiba.
Faka isicelo sale khosi ukuze ufumane ulwazi oluphambili lweenkcukacha-manani, ngokulinganayo ufumana izakhono zokucinga eziphambili kunye nohlalutyo, ukwazi ukuhlalutya idatha, kunye nokusebenza ngokufanelekileyo ekusombululeni iingxaki zehlabathi lokwenyani.
Phambi kokuba uthathe le nkqubo kuya kufuneka ubenobuchule kwizifundo zenqanaba lokuthweswa isidanga njenge-algebra yomgama, ubalo okanye ukubakho, kunye nenkqubo.
Inkqubo ye-intanethi ye-intanethi yeeyunithi zeeyunithi ezingama-45 kwaye ithatha umyinge we-3 ukuya kwi-5 iminyaka ukugqiba.
Imirhumo yokufunda ngeStanford Online Masters Programme
Imali yokufunda eStanford Online Masters yile $ 1,352 ngeyunithi nganye kuzo zonke iinkqubo.
Khange ndikhuphe mali yokufunda kwinkqubo nganye kuba ziyafana. Isifundo kwikhosi nganye yi- $ 1,352 ngeyunithi kwaye ikhosi nganye isusela kwiiyunithi ze-3-5 kwaye kuya kufuneka uzuze iiyunithi ezingama-45 zekhredithi kwisithuba seminyaka emi-5 yomhla wokuqala wokunikwa isidanga senkosi.
Ngezi nkcukacha, kuya kufuneka uyazi inkqubo eya kukufanelekela ngakumbi ekuqhubeleni phambili nomsebenzi wakho. Emva kokugqitywa kwenkqubo oyikhethileyo, uya kufumana isatifikethi esifanayo njengoko umfundi efumana isidanga senkosi yaseStanford, akukho mahluko.
Kwakhona, ngexesha lenkqubo yenkosi yakho ekwi-Intanethi, kulindeleke ukuba ube nengqesho esisigxina.
Okwangoku kuya kufuneka ukuba uthathe isigqibo malunga nenkqubo ye-intanethi yeStanford ofuna ukuyifumana kwaye linyathelo lokuqala lokufaka isicelo sokwamkelwa kwenkosi kwiStanford.
Okokuqala, kuya kufuneka ukhethe inkqubo oyikhethayo uze uqhubeke yenza iakhawunti kwiqonga le-Intanethi laseStanford kwaye uqale Isicelo seStanford online master.
Kukho iindlela ezithile ekufuneka uzipasile ukuze ulungele ukwamkelwa.
Ukulungela ukwamkelwa kwe-Master's Stanford Online
Ukuba ungumfaki sicelo ovela eMelika, kufuneka ubambe isidanga se-bachelor kwikholeji yase-US okanye eyunivesithi eyamkelweyo.
Ukuba uvela ngaphandle kwe-United States okanye nayiphi na indawo yehlabathi, kuya kufuneka ubambe isidanga sebhatshela kwikholeji eyamkelweyo okanye eyunivesithi.
Yiyo yonke into efunekayo ukuze ulungele naziphi na iinkqubo ze-intanethi zeStanford kwaye uqiniseke ukuba isidanga sebhatshi osibambayo yinto efunekayo ukuze wamkelwe kwinkqubo yakho oyithandayo.
Emva kokuba ukhethe ikhosi kwaye udlulise imeko yokufaneleka, kukho iifayile eziyimfuneko ezifuneka ukuba zihambe nesicelo sakho.
Imfuno yeStanford Online Master
Ukuqwalaselwa njengabafaki-zicelo kufuneka bangenise amaxwebhu abaluleke kakhulu;
Le yifayile ebhaliweyo ukuba abenzi-zicelo baya kungenisa kwi-Intanethi njengenxalenye yenkqubo yokwenza isicelo yokwamkelwa. Ingxelo yenjongo kufuneka ichaze oku kulandelayo;
Izizathu zakho zokufaka isicelo kule nkqubo icetywayo eStanford kwi-intanethi kunye nendlela oyilungiselele ngayo le ndawo yokufunda.
Ukunceda ikomiti yokwamkelwa kuvavanyo lokufaneleka kwakho kunye nenkuthazo, kubalulekile ukuba ubhale malunga nezicwangciso zakho zekamva lomsebenzi kunye neminye imiba yemvelaphi yakho kunye nomdla.
Yenza ingxelo yakho yenjongo iqonde ngqo kwinqanaba kwaye inentsingiselo, unokufaka ifayile enye kodwa ayifanelanga ukuba ngaphezulu kwamaphepha amabini ubude kwaye kufanele ukuba ibhalwe ngesiNgesi.
Iileta ezintathu zoncomelo ziyafuneka kwaye zisingathwa ngenkqubo yengcebiso ekwi-intanethi eyinxalenye yesicelo se-Intanethi sikaStanford. Kwicandelo lokucebisa lesicelo uya kucelwa ukuba ubhalise olu lwazi lulandelayo;
Igama labacebisi abathathu, nangona ungabhalisa ukuya kuthi ga kwisithandathu kodwa bathathu kuphela abanconywayo kwaye ungaphindi igama okanye iinkcukacha zonxibelelwano.
Iziko okanye ukudibana kweshishini lomcebisi ngamnye.
Ukubonelelwa kweedilesi ze-imeyile ezifanelekileyo zabacebisi ozibhalileyo
Kuya kufuneka ukhethe ukuba uyaliyeka okanye awuyiyeki ilungelo lakho lokubona isindululo.
Iirekhodi zemfundo kwizikolo zangaphambili
Ezi zikwabizwa ngokuba yimibhalo ebhaliweyo kwaye kuya kufuneka ungenise yonke imibhalo ekholeji nakwiyunivesithi oye kuzo unyaka omnye ubuncinci
Njengenxalenye yenkqubo yokwenza isicelo kuya kufuneka ukuba uthathe iimviwo ezimbini ezizezi;
Uviwo lweRekhodi yeeGraduate (i-GRE) lunyanzelekile kuwo wonke umntu ukuba aluthathe kwaye,
Uvavanyo lwesiNgesi njengoLwimi lwangaphandle (TOEFL) lukhetho ngaphandle kwabafundi abavela kumazwe ulwimi lwabo lwesiNgesi.
Ukuba uwela kudidi lokuthatha zombini iimviwo, zithathe kwaye ulayishe amanqaku ngexesha lesicelo sakho.
Ukungenisa isicelo sakho seMasters eStanford kwi-Intanethi
Emva kokuqokelela onke amaxwebhu ayimfuneko, ngexesha lokulayisha, ubungakanani befayile yoxwebhu ngalunye akufuneki idlule kwi-10MB kwaye zonke iikopi mazibe kumnyama nomhlophe kuphela. Kuyimfuneko ukuba ugcine iikopi zakho zeefayile ozifakileyo njengoko iStanford ingazukubuyisela kuwe naliphi na elinye iqela.
Emva kokugqiba isicelo sakho kwaye usingenise, uya kusiwa kwiphepha lokuhlawula ukwenza umrhumo wesicelo sexesha elinye $125 ngenkqubo yentlawulo ekwi-intanethi ngedebhithi yakho okanye kwikhadi letyala.
Uya kuba nethuba lokuprinta isicelo sakho esigqibeleleyo kwilog yomsebenzi wakho.
Oku kuzisa eli nqaku malunga nendlela yokwamkelwa kweenkosi zeStanford ezikwi-Intanethi, kodwa ukuba uziva ngathi awunakukwazi ukuyiphatha kodwa usafuna ukuphucula izakhono zakho kwaye ube yingcali ngakumbi ke ubone uluhlu Iikhosi ezili-13 zoqeqesho kwi-Intanethi zabafundi nabasebenzi eziqinisekileyo ukukuxhobisa ngolwazi kunye nesakhono esifunekayo ukuze ube yingcali kwicandelo lakho.
I-15 yaseYunivesithi yaseStanford eyaziwayo eyaziwayo Alumni
Iiplatifti ezi-9 eziPhambili zokuFunda kwi-Intanethi ezinesicelo sasimahla
Iinkosi ezikwi-Intanethi zeStanford
Post Previous:I-10 ephezulu yeSayensi kwi-Biology Jobs
Okulandelayo Post:6 Ithemba eliPhezulu leMisebenzi yoKhuseleko lweCyber
Pingback: Iikhosi ezi-4 eziSimahla zeMasters kwiKhosi eneZatifikethi 2021
Pingback: Idiploma yasimahla yesikolo esiphakamileyo kwi-Intanethi ngaphandle kweNdleko yaBantu abaDala ngo-15